Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu, Ụlọ Egwuregwu Nlekọta Tennis, Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ na Ngwá Ọrụ na China
Nkọwa:Egwuregwu Egwuregwu Football,Ụlọikpe Tennis Tennis ,Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Ọrụ,Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu,,
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu Egwuregwu Football
Ngwaahịa nke Egwuregwu Egwuregwu Football , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Egwuregwu Egwuregwu Football , Ụlọikpe Tennis Tennis suppliers / factory, wholesale high-quality products of Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Ọrụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Igwe ọkụ ọkụ dị elu nke ìhè 800w 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ ọkụ dị elu nke ìhè 600w 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu ọkụ ọkụ ntụpọ 500w 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
High ike Ikanam Chakwasa ihie 300w 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Mpụga ọkụ dị n'èzí LED 30 ogo 800w  Kpọtụrụ ugbu a
Mpụga ọkụ ọkụ LED n'èzí 30 ogo 600w  Kpọtụrụ ugbu a
Mpụga ọkụ dị n'èzí LED 30 ogo 500w  Kpọtụrụ ugbu a
Mpụ ọkụ na-enye ọkụ n'èzí 30 ogo 300w  Kpọtụrụ ugbu a
Ikike 800w bọọlụ ikanye 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Ikike ọkụ ọkụ 600w bọọlụ 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Ikike 500w bọọlụ ikanye 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
300w LED football Light 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
800W LED High Mast Stadium Light  Kpọtụrụ ugbu a
Light Light Mast Stadium 600W LED  Kpọtụrụ ugbu a
500W LED High Mast Stadium Light  Kpọtụrụ ugbu a
300W LED High Mast Stadium Light  Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 800W Ọpụpụ LED Stadium Light Light  Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 600W Ọpụpụ LED Stadium Light Light  Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 500W Ọpụpụ LED Stadium Light Light  Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 300W Ọpụpụ LED Stadium Light Light  Kpọtụrụ ugbu a
Enyocha Ebe Ahịa 800w 130lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Nsonaazụ a dị elu nke nnukwu ọkụ ọkụ 800w 130lm / w nwere ọnụọgụ nke 65,000lumens. Nnukwu ike 800w 130lm / w LED spotlight dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis...
Nsonaazụ a dị elu Pụrụ Iche ọkụ ọkụ 600w 130lm / w nwere ọnụọgụ nke 65,000lumens. Nnukwu ike 600w 130lm / w LED spotlight dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na...
Nsonaazụ a dị elu nke nnukwu ọkụ ntụpọ 500w 130lm / w nwere ọnụọgụ nke 65,000lumens. Nnukwu ike 500w 130lm / w LED spotlight dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis...
Nke a na elu mmepụta High ike Ikanam Chakwasa ihie 300w 130lm / w nwere ọnụ nke 65,000lumens. The Ikanam Chakwasa ihie 300w 130lm / w High ike bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka...
Elu ọkụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 800w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The Lightdoor800w LED ntụpọ 15 ogo dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe...
Nsonaazụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 600w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The mpụga ìhè ọkụ Lightdoor600w 15 ogo bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka basketball n'ụlọikpe,...
Nsonaazụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 500w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The Outdoor500w Ikanam Chakwasa ihie 15 ogo bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka basketball n'ụlọikpe,...
Nke a dị elu Mmepụta n'èzí LED ntụpọ 15 Celsius 30 Celsius 60 ° 300w nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ọkụ na- acha ọkụ aja aja dị N'èzí 300w 15 Celsius 30 Celsius 60 Celsius dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na...
Nsonaazụ ọkụ a dị elu 800w bọlụ bọl bọlb 130lm / w nwere ngụgụ nke 65,000lumens. Ihe ọkụ bọọlụ LED 800w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe...
Nmepụta a dị elu LED 600w Football Light 130lm / w nwere ngụgụ nke 65,000lumens. Ihe ọkụ bọọlụ LED 600w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe...
Nmepụta ọkụ a dị elu 500w bọl bọlụ bọl bọlb 130lm / w nwere 65,000lumens. Iche Ihu Egwuregwu Kọmputa LED 500w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na...
Nsonaazụ a dị elu 300w LED bọọlụ Lightlight 130lm / w nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Igwe ọkụ bọọlụ LED 300w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe...
Esemokwu a dị elu 800W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 800w High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe...
Nnukwu ọkụ a 600W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ dị 65,000lumens. Light Light 600w High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na...
Nnukwu ọkụ a 500W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ dị 65,000lumens. Light Light 500w High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na...
Nsonaazụ a dị elu 300W LED High Mast Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 300W LED High Mast Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na ebe egwuregwu dị ka ụlọ ikpe basketball, ụlọ egwuregwu tennis na ebe...
Nsonaazụ a dị elu BrightStar 800W n'èzí LED Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 800W BrightStar N'èzí LED Stadium Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ...
Nsonaazụ a dị elu BrightStar 600W Ọpụpụ LED Stadium Light nwere 65,000lumens. Light 600W BrightStar Ọpụpụ LED Stadium Light Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ...
Ọdịdị elu a BrightStar 500W n'èzí LED Stadium Light nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ejiri ọkụ 500W BrightStar Ọpụpụ Stadiumlọ Egwuregwu Light Stadium dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe...
Nsonaazụ a dị elu BrightStar 300W Light Light Stadium Stadium nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Light 300W BrightStar Ọpụpụ LED Stadium Light Light dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ...
Esemokwu a dị elu nke Led 800w 130lm / w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. Chakwasa ihie 800w 130lm / w LED dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ....
China Egwuregwu Egwuregwu Football Ngwa
Nke a elu mmepụta Football egwuregwu egwuregwu nwere ọnụ ọgụgụ lumen nke 160,000 na akara ihu nke ogo 60. Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ nke 5000K Ụlọ ọkụ ọkụ ọkụ dị mma maka ọkụ ọkụ na nnukwu ụlọ egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ ịgba tennis na ebe ndị bọl, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ buru ibu. A na-eji ọkụ na-eme ka ogwe ọkụ na-acha ọkụ elee anya na-arụ ọrụ ruo oge 45,000+, na-ewepụ mkpa ọ dị iji dochie ihe ntanetị. Site na dochie HIP / HID / MH bulbs / fixtures na LED 200W ị na - ebelata ọkụ eletrik gị ruo 80% .Ọtụtụ mpaghara a bụ Led Sports Field Lighting nwere Ntube Nchebe 67, nke pụtara ájá kpuchie ma chebe ya pụọ ​​nmikpu mmiri. Ihe a na-eme na nke a n'èzí na-adabere na ntinye nke IP67 na-eme ka ntinye gị na-enye ihe ndị ahụ .Ọ nwere akwụkwọ ikike afọ ise na-enweghị njedebe.
Egwuregwu Egwuregwu Football Ụlọikpe Tennis Tennis Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Ọrụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Basketball